Wiil Uu Dhalay Madaxweyne Trump Oo Laga Helay Cudurka COVID 19
Melina ayaa sheegtay inay aad uga cabsatay xaaladda Barron kaddib markii laga helay cudurka Covid-19. Balse waxay intaa ku dartay in nasiib wanaag uu yahay wiil da’yar, sidaa awgeedna ayna ka muuqan astaamihii cudurkaasi.
Madaxweyne Trump iyo xaaskiisa Melina ayuu hore cudurkan u haleelay balse haatan ka bogsaday.
Trump ayaa markii dambe sheegay in wiilkiisa Barron uu xanuunkani hayay muddo aad u yar isla markaana uu ka bogsaday maadaama buu yidhi difaaciisa jidhka uu aad u wanaagsan yahay.
Waxa uu intaasi ku daray in Barron uu tusaale fiican u yahay carruurta dalkaasi Mareykanka iyo sida ay adkaysiga ugu yeelan karaan cudurkaasi, sidaa awgeedna ay tahay in dugsiyadda dalka dib loo furo sida ugu dhakhsaha badan. Arrintaasi ayaa waxaa aad uga soo horjeesaday ururka midowga macallimiinta dalkaasi, kuwaa oo ku doodaya in ay suurtagal tahay in macallimiin badan ay qaadaan cudurkaasi.